DAAWO:-Sheikh Kenyaawi Mahad Salad waa Abtigay iimana hanjabin | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Sheikh Kenyaawi Mahad Salad waa Abtigay iimana hanjabin
DAAWO:-Sheikh Kenyaawi Mahad Salad waa Abtigay iimana hanjabin
Sheikh Kenyaawi ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya uu bixiyay wuxuu kaga hadlay hadalkii kasoo yeeray xildhibaan Mahad Salaad ee ahaa inuu dhaqaalo ka qaatay dowladda Soomaaliya.
Sheikh Kenyaawi, ayaa horeyn si cad u sheegay inuusan wax dhaqaalo ah ku qaadan muxaadarada uu ka jeedinayo garoonka kubadda cagta ee Koonis, waxaana uu sheegay in Alle dartii ay ka tahay.
Wuxuu ka jawaabay inuu ku milmay siyaasadda Soomaaliya iyo warar kale oo sheegaya in xildhibaan Mahad Salaad uu dil ugu hanjabay, kaasi oo saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada laga hadal hayay.
Sheikh Kenyaawi ayaa sheegay in dad been abuurka ka shaqeeya ay sameeyeen arinta lagu qalqal gelinayo amaankiisa, waxaana uu sheegay in Xildhibaan Mahad Salaad uu yahay Abtigiis, waxaana uusan kala kulmin.
Wuxuu sheegay in siyaasiyiinta hadba xaaladda taagan ku hal qabsadaan, isagana uu soo dhexgalay arin taagneyd oo ah khilaaf u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka.
“Mahad Salaad waa Abtigey, iimana hanjabin mana laga yaabo dad been abuurka ka shaqeeya ayaa isku keenay sawirkiisa iyo keyga, iyaga oo bastoolad soo dhexgeliyay, meelo badan ayaa laga iga soo wacay oo dadka wey aamineen, Waa been anigaa idiin xaqiijinayo”ayuu yiri Sheikh Kenyaawi.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa dhankiisa shaaciyay inuu cafiyay Sheikh Kenyaawi oo ay isku weerareen baraha Bulshada.
Previous articleDHAGEYSO: Puntland oo shaacisay tiradda Qaxootiga soo galay
Next articleDAAWO:-Siyaasi Wasiir ka soo noqday Holland oo Bass wadid bilaabay +SAWIRRO
Midowga Yurub Oo yareeyay Lacagta Ciidanka Kenya Ee Ku Sugan Soomaaliya
Lafta Gareen oo shahaadooyin guddoonsiiyay xildhibaannada la doortay+SAWIRRO